မင်းရဲ့စွဲလမ်းမှုကဘာလဲ? - သင့် ဦး နှောက် Porn တွင်
မင်းရဲ့စွဲလမ်းမှုကဘာလဲ။ သင် porn အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်လိုသော်လည်းမရပ်နိုင်လျှင်သင့်တွင်စွဲလမ်းမှုရှိသည်။ စွဲလမ်းမှုအားလုံးသည် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စနစ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးအများစုသည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုသိပ္ပံနှင့် ပတ်သက်၍ တွေ့သော်လည်းဤအပိုင်းသည် ပို၍ တိကျသည်။
porn ထိုအခါနှင့်အခုဆိုရင်: ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေးမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်"
မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးသည် ambi-wackstrous ဖြစ်လာသည်။ အချို့သောယောက်ျားများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအင်တာနက် porn ထက်အရှုံးပေးလိုကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်?
ဘယ်လိုကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း Trump ကိုမှန်ကန်လိင်နိုင် neuroscience ထုတ်ဖော်ပြသ
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုအကြောင်း - ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံကြောဆိုင်ရာဆောင်းပါး - sensitization ။ ဤပြောင်းလဲမှုသည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်း၊
သင်က Porn အပေါ်ချိတ်ဆက်ပါသလား? ASAM မေးပါ
porn မှလေးစားမှုနှင့်အတူကအချိန်ကြည့်ရှုသုံးစွဲသို့မဟုတ်သင်သည်အဘယ်သို့သောအမှာရှာနေသင့်ဦးနှောက်ပြောင်းလဲသွားပြီရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအစား, ဤနိမိတ်လက္ခဏာအဘို့စောင့်နေကြလော့။
အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းကျုံ့ဦးနှောက်: Porn အသုံးပြုသူများအဘို့အနိမိတျဆိုးသတင်းများ
စွဲဖြစ်စဉ်များအထောက်အထား avid အင်တာနက်ကိုဂိမ်းကစားများ၏ဦးနှောက်အတွင်းတက်ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်, အွန်လိုင်း erotica ၏အသုံးပြုမှုကိုဒတ်ခ်ျသုတေသီများအဆိုအရအွန်လိုင်းဂိမ်းထက် compulsive ဖြစ်လာဘို့ သာ. ကြီးမြတ်အလားအလာရှိပါတယ်။
သော့ချက်အတွေးအခေါ်များအပေါ်ထိမိသောရိုးရှင်းသောခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ တစုံတယောက်သောသူသည်အယူအဆအပေါ်နက်ရှိုင်းအတွက်မသွားဘူး။ ဒါကြောင့်စကားပြောဆိုရန်, သင်၏ခြေစိုစွတ်သောရဖို့နေရာကောင်း။
မူးယစ်အပြုအမူ: Dopamine ၏ 300 လိင်အင်္ဂါ = တစ်လော
dopamine နဲ့ dopamine receptors အပေါ်ဘက်စုံဆောင်းပါး။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း၏အသစ်အဆန်းဦးနှောက် overstimulate နိုငျပုံကိုရှင်းပြသည်။ အဓိကအချက်ကသဘာဝစစ်ကူ (အစားအစာ, porn, လောင်းကစား) တစ်ဦးထုံအပျြောအပါးတုံ့ပြန်မှုများနှင့်မတရားသောတစ်သံသရာမှဦးဆောင်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများတူတဲ့နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
“ ယစ်မူးစေသည့်အပြုအမူများ” (အထက်) ကိုနောက်ဆက်တွဲ။ နောက်ထပ် dopamine receptors ၏အခန်းကဏ္andကိုနှင့်စွဲအတွက် sensitivity ကိုဆုချ။
အဘယ်အရာကို Porn အသုံးပြုသူများငါ့ကိုသင်ပေးခဲ့"
Jove အသုံးပြုပုံကဆုလာဘ် circuitry င်! "
ခေါင်းစဉ်ဖော်ပြသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများထံမှသင်ယူသည်။ အင်တာနက် porn သည် supranormal stimulant တစ်ခုဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆုလာဘ်တစ်ခု၏အစွန်းရောက်ဗားရှင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြသည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးဘီဘင်များကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်အရာများထက်ကျော်လွန်သွားသည်။
ယောက်ျားလေးများနှင့် Porn: ဒါဟာသင့်ရဲ့ခမည်းတော်၏ '' Playboy '' မမစနိုင်
ယောက်ျားလေးများသည်ယနေ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အခြားပြဿနာများကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါစူပါလှုံ့ဆော် porn မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။
ဤဆောင်းပါးသည်မိဘများအတွက်အကြံဥာဏ်များရှိသော်လည်းလူတိုင်းအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းတွင်အခြေခံသိပ္ပံ၊ အသုံးပြုမှုတိုးပွားလာခြင်းနှင့်လိင်အရသာပြောင်းလဲမှုများကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။ အတိုကောက်ဗားရှင်းပေါ်လာသည် ကောငျးအမျိုးသားများအတွက်စီမံကိန်း.
သင်က Porn အပေါ်ချိတ်ဆက်ပါသလား? ASAM (2011) မေးပါ
ကလေးများနှင့် Porn: ဒါဟာသင့်ရဲ့ခမည်းတော်၏ '' Playboy '(2010) မဟုတ်
အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းကျုံ့ဦးနှောက် (2011): Porn အသုံးပြုသူများအဘို့အနိမိတျဆိုးသတင်းများ
Marnia ရော်ဘင်ဆင်ကဦးနှောက် (2010) တွင် porn
porn ထိုအခါနှင့်အခုဆိုရင်: ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေး (2011) မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
သင့်ရဲ့ခံတွင်းပျော်ရွှင်မှု (2010) အတွက်ကာကွယ်ပါ
မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု (2011)
အဘယ်အရာကို Porn အသုံးပြုသူများ (2010) ငါ့ကိုသင်ပေးခဲ့
အဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ဦးကအဖော်သန်း Porn ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကိုရှာပါသလား? (2012)
မူးယစ်အပြုအမူ: Dopamine ၏ 300 လိင်အင်္ဂါ = တစ်လောတ (2010)